Isikhumba se-Timbo, Igumbi eliBlue - I-Airbnb
Isikhumba se-Timbo, Igumbi eliBlue
Ikamelo e-i-guesthouse ibungazwe ngu-Fernando
I-Piel de Timbó iyisikhala esinakho konke ukunethezeka, okumema ukuthi uphile isipiliyoni esiyingqayizivele nemvelo. Amahektha amahlanu ahlanganiswe imikhakha yezwe, ingadi yomndeni ephilayo, i-organic yerba mate plantation kanye nehlathi elinobunzima obuphansi kanye nomfudlana wemithambeka.
Amamitha angu-500 nje ukusuka ekungeneni kwe-Salto Encantado Provincial Park, ekuvumela ukuthi ungagcini nje ngokujabulela indawo yakho kodwa namahektha ayizinkulungwane ezingu-14 wendawo evikelekile phakathi kweHlathi laseParanaense.
Indawo yokuhlala yakhiwe ngendlela yesimanjemanje eyakhiwe ngamakamelo amathathu anendlu yokugezela yangasese, i-balcony kanye nekhishi elihlanganyelwayo elinamagalari amboziwe futhi angamboziwe. Inomgwaqo ongena kuwo kanye negaraji. Indawo yokungena ekhabetheni idlula ezitebhisini ezinhlanu zamatshe kanye nompheme wokhuni. Ikhishi lifakelwe isiqandisi esinefriji, isitofu nohhavini. Iphinde ibe namapuleti, izibuko, amabhodwe, izitsha zokupheka nokudla, inezihlalo namatafula. Ungaphinda ucele (izindleko ezengeziwe) inyama namajusi emvelo, imifino ye-organic agro kanye nemikhiqizo yesifunda.
I-Piel de Timbó itholakala nje ngamamitha angu-500 ukusuka e-Salto Encantado Provincial Park. Ingafinyelelwa ngezinyawo futhi inendawo yokudlela enhle kakhulu, imizila kanye nezimpophoma lapho ungajabulela khona isimo sesifunda.
Ngeminye imininingwane ungangena kusizindalwazi: http://www.saltoencantado.tur.ar/
I-Piel de Timbó yibhizinisi lomndeni elinikeza isivakashi i-ajenda yemisebenzi ngesizini ngayinye. Singabuye futhi sihlele ukuvakashelwa kokuhlangenwe nakho okuhlangene (isibonelo, imboni yezingcweti zamaswidi, uviniga notshwala, igumbi lokomisa i-yerba mate, umkhondo we-eco-cultural weqembu lokuqala le-Mbya Guaraní). Sikhuthaza umhlangano nabanye ukushintshanisa imibono, imibono, amaphupho.
I-Piel de Timbó yibhizinisi lomndeni elinikeza isivakashi i-ajenda yemisebenzi ngesizini ngayinye. Singabuye futhi sihlele ukuvakashelwa kokuhlangenwe nakho okuhlangene (isibonelo,…